महाभारतमा इलाका प्रशासन छ, छैनन भवन! एउटै कोठाबाट सेवा, कर्मचारी पनि छैनन! – Radio Roshi
महाभारतमा इलाका प्रशासन छ, छैनन भवन! एउटै कोठाबाट सेवा, कर्मचारी पनि छैनन!
in रोशी खबर / स्थानीय तह — by Roshikhabar —	January 5, 2020
इलाका प्रशासन कार्यालय बनखुमा आवश्यक मात्रमा कोठा नहुँदा एउटै कोठाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाको विकट महाभारत गाउँपालिकालाई लक्षित गरेर स्थापन भएको इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने कोठा समेत नहुँदा एउटै कोठाबाट सेवाप्रवाह गर्नुपर्दा सेवाप्रवाहमा समस्या पर्दै आएको छ ।
प्रमुखको कार्यकक्ष, नाम दर्ता, कम्प्युटर अपरेट, कार्यालय सहयोगी एउटै कोठामा रहेको छ । एउटै कोठाबाट सबै सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कार्यालय जनाएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय बनखुका प्रमुख राममणि काफ्लेले भौतिक पुर्वाधार नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो परेको बताउनुभयो । एउटै कोठाबाट काम गर्नुपर्दा निकै अप्ठेरो परेको उहाँको भनाई छ ।
उक्त इलाका प्रशासनले नागरिकता जारी, प्रमाणित सच्याउने, पार्सपोट सिफारिस र नाबालक परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ । दुर्गमका नागरिकलाई सहजताका लागि कार्यालय खोलिएको भएपनि प्रर्याप्त कर्मचारी नहुँदा समेत सेवा प्रवाहमा समस्या भएको जनाइएको छ । इलाका प्रशासनका प्रमुख काफ्लेका अनुसार सात जना कर्मचारी आवश्यक भएपनि एक जना कार्यालय प्रमुख मात्र रहेको काफ्ले बताउनुभयो । कर्मचारी नगएपछि अन्य तीन जना करारमा नियुक्ती गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख, नासु तीन, लेखापाल एक, कम्प्युटर अपरेटर एक र कार्यालय सहयोगी दुई जनाको दरबन्दी रहेको छ । तर अहिले कार्यालय प्रमुख एक जना मात्र कर्मचारी रहनुभएको छ । भने कम्प्युटर अपरेटर एक र कार्यालय सहयोगी दुई जना करारमा नियुक्त गरिएको छ । २०७५ जेठ ९ गते इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएपछि २०७५÷०७६ मा ४१६ जनाले सेवा लिएका छन ।